Dad ku Barakacay Muqdisho oo ay soo wajahday Xaalad Nololeed oo daran – SBC
Dad ku Barakacay Muqdisho oo ay soo wajahday Xaalad Nololeed oo daran
Dad barakacayaal ah oo maalmhii ugu dambeeyay ku soo qululayay magaalada Muqdisho xarunta dalka isla markaana ubadan waayeel Caruur iyo Haween ayaa ay xaalad adag ku heysataa qeybo ka mid ah degmooyinka Muqdisho oo ay degenyihiin.
Dadkani oo ka mid ah dad maalmihii ugu dambeeyay ka soo barakacayay Abaaro iyo Colaado ka jira qeybo ka mid ah gobolada Dalka ayaa waxaa ay fariisimo ka sameysteen xerooyin ku yaala degmooyinka Xamarweyne iyo Waaberi .
Dadkan oo Maanta Aanu ku booqanay Xero yar oo ay ka sameysteen kaniisadii hore ee Talyaaniga ayaa ka warbixiyay xaalada liidata ee heysata, iyagoona sheegay in iyagoo faramaran ay ka soo carareen deegaanadoodii ay ku dhaqnaayeen ka dib markii ay Saameyn xoogleh ku yeesheen abaaro ba’an.
Hooyo ka mid ah Hooyooyinka Da’da ah ee iyagu ka mid ah dadkan soobarakacay Ayaa SBC u sheegtay in meeshan ay yimaadeen aysan ku heysan Cuno iskaba daa meel ah harsadaan docdakalana seexdaan Habeenkii
Hay’adaha Samafalka, Ganacsatada iyo cid alaala cidii wax u qabankarta ayay ka codsadeen dadkani in ay la soo gaaraan Gar gaar Deg deg ah haba ugu horeysee wax ay ku noolaadaan.
Marka aad si gaar ah u eegto dadkan goobta ay degenyihiin waxaa kuu muuqanaya Nadaafad daro aad u xun iyo nolol liidata oo naxdin leh, taas oo ay si aad ah uga naxeyso Naftaada.
Yaasir C/laahi Siciid